Malunga nathi - I-ORION INDUSTRY NENKAMPANI YORHWEBO LIMITED
Iitafile kunye nezitulo / iiseti zebhedi
Iitafile zekofu / zokuNya
Ukuma ebusuku / iitafile ezisecaleni
Iibhentshi / Izihlalo
Ezinye iitafile / izitulo
KULIMI KUNYE NEPATIO
Itheyibhile kaMoses kunye nezihlalo
Izibonda zegadi / Izilwanyana zensimbi
Iintsimbi zomoya oyiGadi / iiChimes zomoya
Ukuma kwezityalo / Iimbiza zeentyatyambo
I-Pergola / Arches / Arbors
Iibhedi zezilwanyana zasekhaya
IINDAWO ZOKUQHAWULA, IZISEKO NEENQWELO-MAFUTHA
Rack Wine & Izibuko Holder
Iimpahla & umnqwazi kwendawo yokuhlala
Ubude bethuba lokudada
Itroli / Inqwelo
II-LANTERNS KUNYE NABAPHATHI BAMAKHANDLE
UMHLAHLO WOKUSETYENZISWA / UKUHONYISWA KWEDONGA
Omnye uMthendeleko weDecor
Ubugcisa beWall Metal
UKUHLAWULWA KWETABLETOP DECOR
Umboniso kunye neSatifikethi
Yonke into ofuna ukuyifumana malunga neShishini lethu leOrion kunye noRhwebo Co, Ltd. itafile yokutya
Igumbi lokutyela kulapho iindwendwe zakho kwaye zabelana ngokutya okubalulekileyo nosapho.Itheyibhile yokutyela ngokuqinisekileyo ayindawo ephambili kwigumbi lokutyela. Ukuthenga itafile entsha yokutyela ngamava obuqu kakhulu ngenxa yezizathu ezininzi. Zininzi izitayile kunye nezinto ezikhoyo phaya kwimarike.
"Itafile yesitayile sangoku"
Uyilo lwemihla ngemihla lunokuvela kuluhlu olwahlukileyo lweembonakalo, ukuba nje zinika intsingiselo “yangoku,” ukuza kuthi ga ngoku. Iitheyibhile zangoku zingafunyanwa kulo lonke uhlobo lwezixhobo kunye nakuzo zonke iimeko zoqwalaselo. Kwishishini lethu leOrion kunye noRhwebo siphuhlise uluhlu olubanzi loyilo lwangoku kunye nezinto ezahlukeneyo kubandakanya iglasi, imabhile, ukhuni, i-MDF, njl.Uyilo lwethu lwetafile lokudlela oluphezulu luluhlu lweetafile zesikwere ezinemabhile okanye umphezulu womthi kunye nomlenze omangalisayo uyilo.
Indlela yesimanje ivelisa umxube omnandi wokusebenziseka kunye nobuhle obuchume ekuqaleni kwenkulungwane yama-20. Ihlala ineentsiba njengemigca ecocekileyo kunye neeangile ezibukhali. Ukusetyenziswa kwezinto ezintsha ezinjengeglasi, imarble kuzisa inkangeleko yale mihla kwaye kwenza kube lula ukudibana nekhaya lakho.
Ukuthetha ngesitayile sefenitshala yaseScandinavia, igama lokuqala eliza engqondweni yam liyindalo. Itafile yokutyela yaseScandinavia ihlala ichazwa njengelula, intle kwaye intofontofo. Iitafile zokutyela zesitayile saseScandinavia zenziwe ngemithi emihle efana ne-oki, i-walnut okanye uthuthu, zihlala zidityaniswa nokugqitywa komgangatho okanye imilenze yentsimbi. Ngobuncinci kunye nokuma okucocekileyo, iitafile zilula, zintle kwaye zilunge ngokugqibeleleyo ngaphakathi.
Isitayile seRustic sisebenzisa umthi ongapeyintwanga ngengqondo yendalo; iimilo ezibaziweyo zezinto ezilula, ezibuyela umva kwindalo ezenza ukuba zithandwe kwiikhabhathi nakwizindlu zokuhlala.
Nangona kungu-2017, isitayile sendabuko iseyeyona ndlela iqhelekileyo oya kuyifumana kwintengiso yetafile yokutya. Ihlala iza nokhuni oluqingqiweyo oluhle, imibala eneenkcukacha, kunye nobukhulu obucebileyo. Ukuba ungumthandi wemveli, ngokuqinisekileyo lolukhetho lwakho olulungileyo, Masibe ngumzi mveliso weOrion kunye noRhwebo lube lukhetho lwakho lokuqala.
Umhlaba wonwabele izibonelelo zotshintsho kwimizi-mveliso. Yiyo loo nto yenza isitayile seshishini sithandwe kuyilo lwangaphakathi. Umdibaniso womthi kunye nesinyithi uhambisa ukujonga kunye nokuziva koomatshini befektri kunye nezixhobo.
Uyilo lwaselunxwemeni ngumxholo wokuhombisa ophefumlelweyo ngefenitshala ebunjiweyo kunye neempawu zokukhumbula izinto ezifumaneka elwandle ezifumaneka kumakhaya emveli aselunxwemeni. Idibanisa ukugqitywa okungacacanga, imibala eluhlaza okwesibhakabhaka kunye nezinto zaselwandle ezinjengeekhampasi, ubomi baselwandle, iiankile kunye nezixhobo.
Ifenitshala yesitayile seShaker sisitayile sefenitshala eyahlukileyo eyenziwe nguMbutho wabakholwayo kuKrestu ngokuBonakala kwesiBini, eyaziwa njengeShakers, ihlelo lenkolo elinemigaqo elula yokusebenziseka kunye nokunyaniseka. Iinkolelo zabo zabonakaliswa kwifanitshala eyenziwe kakuhle yoyilo oluncinci. Ifanitshala yenziwa ngokucinga, ngendlela esebenzayo kunye nenani. I-Cherry, imephu okanye umthi wepeyini zezona zinto zixhaphakileyo.
Ifanitshala yecottage iyinyani kwisitayile seVictoria kuba iibhedi zinokuphakama (ngaphezulu kweenyawo ezintandathu okanye nangaphezulu) kunye neebhodi eziphambili ezihonjiswe ngokumangalisayo. Kukho into eqingqiweyo, ihlala ikwimo yesiphelo kunye neemallallion, kodwa uninzi lomhombiso lwalupeyintiwe. Iintyatyambo, iziqhamo, kunye nezinye izityalo zezona zinto zixhaphakileyo ezinesimbali esikhulu esenziwe ngepeyinti kwiphaneli esembindini kwibhodi encinci kunye encinci, ehambelana nebhodi yeenyawo.
Imveliso eshushu - Imephu yendawo
izibane zokuhombisa, izibane zelanga, isibane esikhokelwa, isibane pendant ukukhanya, ubugcisa bodonga lwesinyithi, Isinyithi sokuhombisa isitiya,
ABASEBENZI BAMAKHANDLE & IINKCUKACHA
Ishumi elinambini #, isakhiwo sesi-2, 1 # jiangbing southe avenue, isithili selicheng, quanzhou, china